Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "Pope", iro shamwari manzwiro?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "Pope", iro shamwari manzwiro?
Pope muri pakati ndiye "Pope" nzira
Pope kuti kuzvitaurira 3500 Yen vakasununguka zvaanoreva
nyanzvi kufembera ari neizvi nzvimbo kadhi, vanhu vaviri nevafundisi pamberi papa, uye shure naPapa maviri mumwe mbiru dzave zvichishandurwa serinomiririra nhamba "5". Pope kubva chokwadi kuti kudzora nyika yomudzimu, kusiyana mambo, kana kuti kuona zvinhu nenzira yechitendero nemaonero, iwe kana akaita mutongo.
mukadzi asina Papa uye kusiyana mabhuku (Tora), uye purofesa wezvetsika uye tsika kuti vanhu noutsvene hwake, pasinei bhuku, chii akakwezva kuvimba uye kuremekedza kubva dzakapoteredza Pope dzinoti ndaiti.
Pope of kadhi pachako tsitsi, rukudzo, mutsa, tsitsi, nechivimbo, akadai kuchengetwa kurayirirwa uye zvakadai, kuti vanzwe zvakanaka inzwi vanhu kunhivi, zvinoreva kuti chinhu kuvapo kuti airemekedzwa kubva kuvanhu.
Pope kuti mupikisi manzwiro
Pope kuti kadhi rine zvakanaka nzvimbo Vanzveri, izvo zvinoreva kuti kuona zvinhu nenzira yakafara mumunda maonero uye kudzikama kana mawana munhu zvakanaka nzvimbo mafungiro, ndiyo pfungwa kubata nokuyerera akanaka une. Kana vaviri ndinofunga vanhu vanofanira kuva vakanaka ukama wako. Vazhinji, anomiririra mamiriro iyo varambe maviri vanhu ukama akatanga ukama hwako ari kufambira mberi kuti ave matchmaking.
kuva chikomborero kubva nharaunda, vakawanda nyaya Pope iri kadhi, mumwe bato iri vakafunga kuti tikoshese ukama newe, tinoda kudzamisa kunyange rudo kubva ikozvino. Saka kukoshesa anokumhan'arira, chii chinogona kuramba kuvimba muukama zviri kuitwa kuti rakatorwa vaviri kufunga munhu.
nyaya vanhu rusina kukwana mberi rudo, kuti ave mumwe bato iri akavimba kwazvo iwe, unzwe nyaradzo kuti uri dzimwe nguva, dzakadai hama uye hanzvadzi ukama. In kutenda chakanaka apo pakupindura kukura rudo ukama, zvahuchaunza zvabuda kuti anogona kuva vakanaka uye tohuudzawo manzwiro kune vamwe vari kutarisika mafungiro.
neizvi Papa Akasungwa uye kusavimba mune zvakaitika neizvi chinzvimbo manzwiro
Pope kuti mupikisi ane chinzvimbo zvinofanirwa kureva, unofanira kungwarira nokuti rinomirira akadai nokuzvidzora vasingakendengi. Kana vaviri ndinofunga vanhu vave kusavimba newe. Recently Rega peppered mashoko akafanana vatadzire noudyire maitiro uye nemumwe? First zvakare mafungiro avo, ndapota edza kunyorerana mukutenda zvakanaka noruremekedzo kune bato. Kutora kure pakati
nemudiwa, zvinokoshawo adzikamise manzwiro. Vanhu rusina kukwana mberi rudo, asi mudiwa vangave vasina okuda nemi. Edza vaaisangana kwenguva yakati zvino mamiriro ezvinhu, nguva kana kushaya mberi ukama, zviri nani kuti kuedza asingapotereri kutsvaga chinotevera anokumhan'arira, unogona kuva kunozorodza uyewo manzwiro avo.